के हो माधवकुमार नेपाल रुँदै गरेको भाइरल फोटोको वास्तविकता? - Nepal Factcheck
श्यामसुन्दर पुडासैनी –
नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रोएको फोटो र समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले ‘आफूलाई दोस्रो तहका नेताहरूले धोका दिएको भन्दै’ सार्वजनिक कार्यक्रम रोएको दावी गरिएको सो समाचारमा उनी रोएको जस्तो देखिने फोटो पनि राखिएको छ।
गएको शनिबार (२८ अगस्त २०२१) पेशागत महासंघले ललितपुरमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यही कार्यक्रमको समाचारमा उनको यो रुँदै गरेको फोटो राखिएको हो।
ब्रेकएनलिङ्कसको नेपाली संस्करणमा यो समाचार ‘माधव नेपालले रुँदै भने: ‘पछिबाट धकेल्ने साथीहरूले आँखै अघि छाेडे’ शीर्षकमा राखिएको छ।
यो समाचारमा अध्यक्ष नेपाल रोएको जस्तो देखिने तीन वटा फोटो एकै फ्रेममा जोडेर ब्रेकएनलिङ्कसको लोगोसहित राखिएको छ। पहिलो फोटोमा नेपालले माइकमा बोल्दै गर्दा एक हात टेबलबाट थोरै माथि उठाएका छन्। उनी झुकेको देखिन्छ। साथै उनले मुख बिगारेर रोएको जस्तै देखिन्छ। दोस्रो फोटोमा हातले नाक पुछेको जस्तो देखिन्छ। तेस्रो फोटोले पनि अघिल्ला दुई फोटोको जस्तै आफूले रोएको अरूले नदेखुन् भनेर शिर निहुराएर हातले अनुहार छोपेको जस्तो देखिन्छ।
अन्तिम अवस्थामा आएर आफ्नो साथ छाडेका नेताहरूलाई व्यंग गर्दै उनले भने, ‘मलाई धकेलेर अगाडि बढ भन्नेहरू नै पछाडि हेर्छु त कोही छैनन्।’
उनले पहिलाेपल्ट सार्वजनिक कार्यक्रममै अनुहार मलिन (रूदै) बनाएर भावुक हुँदै नेपालले भने, ‘दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न म खुशी-खुशी तयार छु। आउनुहोस्, अध्यक्ष बन्नुहोस्। बलियो नेतृत्व गरेर पार्टीलाई उचाइमा लग्नुहोस्। मैले पदको लागि विद्रोह गरेको होइन्, वैचारिक सत्यको लागि विद्रोह गरेको हुँ।’
ब्रेकएनलिङ्कसमा प्रकाशित यही फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले पार्टी फुटाएकोमा नेता माधवकुमार नेपालले पछुतो मानेको अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। अरु केही अनलाइनहरुले पनि यही फोटो र समाचार साभार गरेका छन्।
एमाले बौद्धिक केन्द्र नामको फेसबुक ग्रुपमा यो फोटोसहितको समाचारमा ४७ कमेन्ट र ३२ सेयर छन्।
टुडेखबरको फेसबुक पेजमा यही फोटोसहितको समाचारमा ३२२ रियाक्सन, ९० कमेन्ट र ४१ सेयर छन्।
खुलाकुराले पनि यही फोटो र समाचार साभार गरेको छ।
शनिबार नेता नेपाल पेशागत महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित थिए। समाचारमा भनिएजस्तै उनले आफूलाई दोस्रो तहका नेताले धोका दिएको बताएको विषय अनलाइनखबरले पनि लेखेको छ। अनलाइनखबरको समाचार शीर्षक छ-मलाई अगाडि घचेटे, पछाडि हेर्छु त कोही छैन
यो बारे समाचार इकान्तिपुर, नयाँ पत्रिका र सेतोपाटीमा पनि छ। तर कुनै पनि समाचारमा माधव नेपाल रोएको उल्लेख छैन।
कार्यक्रममा माधव नेपालले सम्बोधन गरेको भिडियो यो युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ जहाँ उनले ‘मलाई घचेटेर अघि बढ भन्ने, पछाडि फर्केर हेर्छु त कोही छैन’ भनेको पनि हेर्न सकिन्छ। भिडियोमा उनी रोएको देखिन्न।
रोएको फोटो कहाँ बाट आयो ?
माधवकुमार नेपाल रोएको फोटो भने दुई वर्ष पुरानो हो। त्यतिबेला एमाले नेता योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री भएका थिए । उनी मन्त्री भएपछि पहिलो पटक संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक नेता नेपाल रोएका थिए।
२०७६ साउन १९ गते प्रकाशित रातोपाटीको समाचार
२०७६ साउन १९ गते बिहान सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री भट्टराईलाई बधाई दिएका थिए। बधाई पाएपछि बोल्ने क्रममा भट्टराई भावुक बनेका थिए। उनको गला अवरुद्ध भएको थियो। भट्टराईको कुरा सुनिरहेका नेता नेपालले पनि मन थाम्न सकेका थिएनन्। उनी पनि भक्कानिएका थिए। सोही समयमा खिचिएको भिडियोको स्क्रिनसट नै अहिलेको समाचारमा राखिएको हो।
हेर्नुस् रातोपाटीले राखेको भिडियो
अनलाइनखबरले पनि त्यतिबेलाको भिडियो राखेको छ-
दुई वर्ष पुरानो भिडियोको स्क्रिनसट।
दावी : ब्रेकएन्डलिङ्कससहित अन्य अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा राखिएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले धोका दिएको कुरा गर्दै माधव नेपालले रोएको खबर र रोएको फोटो।
तथ्य जाँच : भ्रामक। माधव नेपाल रोएको समाचार सो कार्यक्रमको भिडियोमा देखिएन। सो समाचारमा राखिएको फोटो भने सोही कार्यक्रमको नभएर दुई वर्ष अगाडि २०७६ साउन १९ गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकको हो।